Home Wararka Maxay Fahad & Farmajo u diidan yihiin in uu heshiis dhaco?
Maxay Fahad & Farmajo u diidan yihiin in uu heshiis dhaco?
Hay’adda Nabadsugigga iyo Sirdoonka ee NISA waxaa tan iyo dowladii Kacaank ahayd hay’ad aanu sharcigu qaban oo nidaamka markaasi joogaa uu adeegsado si uu xukunkiisa ugu adkeysto ama kuwa ka horjeeda ku maquuniyo.
NISA waxaa lagu guuldarreystay in sharcigeeda dib loo habeeyo oo laga dhigo Hay’ad la saanqaadi karta nidaamka Federaalka ee dalka uu qaatay, waxayna mar kasta gacantiisa ku jiray madaxweynaha xilligaasi jooga, iyadoo tuhunno badan ay hareeyeen shaqadeeda.
Markii uu talada dalka qabtay Maxamed C/llaahi Farmaajo waxay hay’adda NISA isu bedeshay hay’ad u adeegta Madaxweyne Farmaajo shaqsi ahaan, wuxuuna guud ahaan la wareegay Ogost sanadkii 2018 markii uu Agaasime uga dhigay Fahad Yaasiin, waxaana tan iyo markaas lagu maamulayey iyadoo aanay lahayn agaasime ku xigeeno oo.
Waxay Hay’adda NISA faraha la gashay arrimo siyaasadeed, waxaana loo adeegsaday weerarro lagu qaaday siyaasiyiin iyo maamul Goboleedyo, waxayna faraha la gashay arrimo doorasho iyo kiisas waaweyn oo dalka dibaddiisa loogu diray ciidamo.
Iyadoo xilligan xaaladda kala guurka ah lagu jiro, isla markaana la guda galay Doorasho cagajiid ku socota ayaa waxay NISA ku lug yeelatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd Sarkaalad ka tirsan isla Hay’adda NIS oo la waayey, waxaana arrintan darteed khilaaf culus dhex maray Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’isal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Khilaafkan ayaa keenay in Ra’iisal wasaare Rooble xilkii ka qaado Agaasimihii NISA Fahad Yaasiin, taasoo uu markii hore diaday Farmaajo, balse kadib uu aqbalay, waxaase weli la isku haystaa cidda maamuleysa Hay’adda NISA.
Farmaajo iyo Fahad waxay si weyn ugu dhegan yihiin Hay’adda NISA, iyagoo diidan inuu maamulkeeda soo dhex galo qof ka baxsan shaqsiyaadka ay iyagu wataan, sababaha ugu weyn waxaa ka mida:
1- SIRTA HOGGAANKA FARMAAJO
Hay’adda NISA waxay heysaa sirta hoggaanka Farmaajo intii uu talada qabtay, siiba saddexdii sano ee ugu danbeysay, waxaana sirtaasi ku jira qaar ay siyaasad ahaan u dhiman karaan ninka loogu yeero milkiilaha dowladda Fahad Yasiin iyo saaxiibkiis Maxamed Farmaajo.
NISA oo maamulkeeda ka hoos basdo waxay ka dhigan tahay inay xoroobaan saraakiisha Hay’adaasi oo ay soo bandhigaan wixii gudaheeda ka dhacay iyo arrimo hadda qarsoon oo dad badan lama filaan ku noqon doona.
2- KIISASKA WAAWEYN EE LA TUHUNSAN YAHAY
NISA waa furaha laga heli karo kiisaska waaweyn ee dowladdii Farmaajo hoggaaminayey ku lug yeelatay, laga soo bilaabo Dhiibistii Qalbi-dhagax ee Itoobiya, Xarigii Sheekh Mukhtaar, Kiiska C/rashiid– Qaraxyadii Zoope iyo xarunta Maamulka Gobola Banaadir, Dilkii Eng. Yariisow iyo kiisas kale oo fara badan oo ku Dhex lumay hay’adaha laga soo saari waayey.
Ciidamada Eritrea loogu qaaday tababarka ee aan ilaa iminka dalka lagu soo celin iyo xogta ku wareegsan ayaa ah kiis kale oo NISA gacan ku leedahay, waxaana kiiskan ku qarsoon xog aysan dooneynin saaxiibada Farmaajo inay dadku ogaadaan.
Inkastoo la burubrin karo dhammaan xogaha iyo raadadka dembiyada lagu galay awoodda Hay’adda, haddana waxaa weli jooga xubno laga yaabo inay runta sheegaan marka xaaladu is-bedesho.
3- ARRINTA IKRAAN TAHLIIL FAARAX
Arrinta Ikraan ma aha tan kaliya ee NISA farta lagu fiiqay inay ku lug leedahay, laakiin wuxuu qaraxiyey xaala muddo dheer cakirneyd, wuxuuna soo shaac bixiyey sida NISA u noqotay Hay’ad dowladeed oo dano shaqsiyadeed looga faa’iideystay si ka baxsan sharciga.
Maqnaanshaha Ikraan iyo in la ogaado xogta ku xeeran waxay ku filan tahay jiritaanka iyo sumcadda NISA, waana tan keentay in baaritaankeeda oo si madax bannaan looga sal gaaro uu caqabad ku noqdo xafiiskii ugu sareeyay dalka ee Villa Somaliya.
Isku milanka danaha shaqsiga ah, awoodda dowladnimo iyo Hay’adaha Sharciga waxay keenaan in la kala garan waayo hanaanka dowladimada u dhisan taha, markaasina la yaab ma laha inay dadku arkaan madaxweyne ka amar qaata agaasime, milkiile dowlad iyo in kiis aad u yar oo cadaaladeed isu bedelo arrin qaran oo madaxweynihii dalka waardiye ka hayo.